'Umngane Obulalayo' we-Wes Craven Scream Factor Blu-Ray Inezici Ezikhethekile Ezihehayo I-Line-Up - iHorror
Ikhaya Imisebe ye-Blu I-Scream Factor Blu-Ray kaWes Craven Inezici Ezikhethekile Ezihehayo I-Line-Up
I-Scream Factor Blu-Ray kaWes Craven Inezici Ezikhethekile Ezihehayo I-Line-Up
Uhlu Olupholile Kakhulu Lwezici Ezikhethekile
by UTrey Hilburn III September 12, 2021 488 ukubukwa
UWes Craven's Umngani Obulalayo ulibangise ku-Shout! IFektri Blu-Ray kulo Okthoba. Indaba yothando lukaWes Craven yayinjengaleyo Isayensi Weird ihlangana Chopping Mall kuhlanganiswe nendaba yothando eyinqaba. Iphinde ifake okunye okubulala ikhanda okungasile okwake kwenziwa ku-cinema. Kubandakanya i-basketball kanye no-Anne Ramsey noKristy Swanson.
Zifingqa okwami Umngani Obulalayo kuhamba kanjena:
UPaul (uMathewu Labyorteaux, amaBarbarians eSangweni), ongungoti ocwaningweni lobuchopho, unabangane ababili abakhulu: irobhothi lakhe elimangalisayo… nentombazane enhle kamakhelwane (uKristy Swanson, uBuffy The Vampire Slayer). Lapho inhlekelele ihlasela abangane bakhe bobabili, uzama ngamandla ukubasindisa ngokucindezela ubuchwepheshe ngaphesheya kwemingcele yabo yokufa bangene endaweni entsha esabisayo.
Ukukhiqizwa kuvuliwe Umngani Obulalayo kwakuyindidane. Ekuqaleni, bekunezinhlelo zokuthi ifilimu ligxile kakhulu kubalingiswa nasendabeni yothando. Kodwa-ke, ngaphambi nje kokuba ifilimu ikhishwe, uWarner Bros. wazibandakanya futhi wafuna inqwaba yodlame nodlame. Yingakho udlame olukule filimu, kufaka phakathi ukuqhuma kwekhanda likaRamsey luzwa lungeyona indawo. Kube ukukhululwa okulahlekile, kepha ukwazile ukuthola izithameli, yize kungezona izethameli eziningi ezitholile.
Ukuhlelwa kwezici ezikhethekile kuhamba kanjena:
Ukuskena okusha kwe-2K kokuthintekayo
OKUSHA Hey Sam, uNice Shot - ingxoxo nomlingisi uKristy Swanson
OKUSHA Kubhalwe Ngegazi - ingxoxo nombhali wesikrini uBruce Joel Rubin
AMarobhothi AMASHA, uRamsey neRevenge - ingxoxo nomculi okhethekile wemiphumela yokwakheka uLance Anderson
INTSHA kaSamantha's Symphony - ingxoxo nomqambi uCharles Bernstein
I-Theatre Trailer (ngesiNgisi, ngeSpanishi nangesiJalimane)
Ungakwazi bhekisa phezulu Kumemeze! Ikhasi le-Factor ukuthola i-oda lakho langaphambilini e.